अम्याजनमा आजसम्म महंगा एप्स निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिने - Technology Khabar
» अम्याजनमा आजसम्म महंगा एप्स निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिने
Technology Khabar १८ पुष २०७१, शुक्रबार
काठमाडौं, १८ पुस । सन् २०१५ को शुरुवातका साथै सपिङ वेवसाइट अम्याजनले ग्राहकहरुका लागि एक विशेष अफर ल्याएको छ । अम्याजनको एप स्टोरबाट शुक्रबार राती अर्थात आज रातीसम्म ११० अमेरिकी डलर सम्मको ३३ एप निशुल्क डाउनलोड गर्ने छुट अफर ल्याएको छ ।
यसमा अझ अर्को रोचक विषय भनेको यी सबै ३३ एप डाउनलोड गर्न ग्राहकहरुले अम्याजनबाट केहि सामान खरिद गर्न आवश्यक छैन् ।
यी ३३ एपमा कयौं प्रकारका गेम्स जस्तै एङग्री वर्ड स्टार वार्स २, फ्रुट निन्जा, किंगडम रश फ्रन्टीयर्स, मोनोपोली, रिपटाइड, जीपी २ जस्ता लोकप्रिय गेम एप्स छन् । यसका साथै कयौं युटिलिटी एप्स पनि उपलब्ध रहेको छ जसमा एभीजी एन्टीभाइरस प्रो एन्ड्रोयड सेक्योरिटी, एलवाईएनइ, जेफीट प्रो तथा फोटो ल्याब प्रो पनि निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
३१ डिसेम्बरदेखि शुरु भएको यो निशुल्क एप्स डाउनलोड अफर आज रातीदेखि समाप्त हुनेछ ।
यी ३३ एप्स ग्राहकहरुले निशुल्क डाउनलोड गर्न पाउनेछन् ।
1. एंग्री बर्ड्स स्टार वार्स 2
2. अलार्म क्लक एक्सट्रीम
3. एलिस ट्र्याप्ड इन वण्डरल्याण्ड
4. एभीजी एण्टीभाइरस प्रो एण्ड्रोयड सेक्योरिटी
5. एजकेंड 2: द वर्ल्ड बिनिथ
6. बिल्स रिमाइण्डर
8. बटन्स एण्ड सीजर्स (प्रो)
9. क्याल्कुलेटर प्लस
10. क्लक टेल्स: अफ ग्ल्यास
11. डीप स्लीप बिल एण्ड्रयू जोनसन
12. डिस्टेंट सन्स: अनलीश योर इनर एस्ट्रोनट
13. फ्रूट निन्जा
14. फूड डेरी एण्ड क्यालोरी ट्र्याकर प्रो
15. गारफील्ड्स स्केप
16. JEFIT प्रो
17. किंगडम रश फ्रंटीयर्स
20. मिनी पियानो
21. माइट एण्ड म्याजिक क्ल्याश अफ हीरोज
23. फोटो ल्याब प्रो
25. रिपटाइड जीपी 2
27. स्पार्कल2इवो
28. स्ट्याक द स्टेट्स
29. टेबल टप रेसिंग
30. टाउन्सम्यान प्रीमियम
31. थोमस वाज अलोन
32. उनकैनी एक्समेन: डेयज
33. एक्स्ट्रालजिक रिमोट डेस्कटप क्लाइंट
यसका साथै अम्याजनले कयौं एप्सको मुल्यमा निकै कटौती गरेको छ । यसमध्येको एक मोन्स्टर्स एट माइ वर्थडे केक पनि एक हो, जसको सामान्य दिनको मुल्य ५ डलर भएपनि अहिले यो करिब १ डलरमा खरिद गर्न सकिनेछ । त्यस्तै फाइनल फ्यान्टासी ४ एपको खरिद मुल्य करिब १६ डलर छ भने यो अहिले करिब ८ डलरमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
अम्याजनका यी एप्स डाउनलोड गर्नको लागि ग्राहकहरुको स्मार्टफोनमा अम्याजन एप स्टोर छैन भने अम्याजनको वेवसाइटबाट एप्स डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
प्रकाशित: १८ पुष २०७१, शुक्रबार